bhimphoto: छालसँग लुकामारी
गाइडले 'गो बोट' भन्नेबित्तिकै विश्रान्ति आश्रमछेउबाट तमोर नदिको पानीमा जब हाम्रो रबरबोट (डुंगा) अघि बढ्यो । मनका दुविधा उत्साही साथीहरूका अनुहारको चमकले कम गरायो । पौडी खेल्न नजान्नेका लागि र्‍याटिफ्ङमा जाने योजना । घरमा सुनाउँदा अभिभावकबाट जाने स्वीकृति मिल्ने अवस्थै थिएन । त्यसैले 'कोसीटप्पु जानु छ' भन्दै म ढाँटेर हिडेको थिए ।
अधिकांश शनिवार टप्पु र त्यस्तै जंगल, डाँडापाखाको यात्राका लागि हुने दैनिकी घरमा नौलो छैन । कहिलेकाही शुक्रवार साँझै निस्किएर ३/४ दिनपछि फिर्दा जवाफ दिइरहनु पर्दैन । परिवारका सदस्य र साथीभाइले सोच्छन् - 'यो पक्कै कुनै चराको पछि लागेर आयो होला ।' यात्रा सुरु भएपछि यसपटक र्‍याफ्टिङमा हिडेको भन्ने जानकारी नदिएर गल्ती पो गरियो कि भन्दै चुकचुक लागिरहेको थियो ।
धरान-धनकुटा सडकमा पर्ने तमोरको फलामे पुल हेर्दा हेर्दै नदेखिने गरि अघि बढियो । करीव ५ मिनेटपछि पहिलो छालमा पस्दा आङ सिरिङ्ग भयो । डर लाग्दो थियो, त्यो र्‍यापीड । रबरबोटको डोरीमा खुट्टा अल्झाएर भएभरको बलले बहना चलाइयो । हामी सबै चिसो पानीले निथ्रुर्क्कै भयौं । भित्री वस्त्रसम्म पानी पुग्यो ।
अघिअघि हेलमेटमा 'गो-प्रो' लगाएका नविन सुनुवार कायाकिङमा थिए । उनी अलि अघि जान्थे । छालको अवस्था बारे संकेत गर्दै अघि बढेका उनलाई हाम्रो डुंगाले पच्छ्याउँथ्यो । कायाकिङ भनेको एकजना मात्रै बस्न मिल्ने सानो डुंगा । डल्लो परेर बस्ने मान्छेले अघि गएर पछि आउनेलाई कसरी बहाव यस्तो छ भन्ने संकेत दिने रहेछन् ।
दोस्रो छालमा डर अलि कम भयो । तर, भयो फेरि उस्तै । पुनः मज्जाले भिजियो । क्यामेरा पहिल्यै सेफ्टी ब्यागमा पोको पारी सकेका कारण म फोटो खिच्न रहर गरिरहेको थिइँन । ज्यान हुत्तिने ठाउँमा फोटो खिच्ने रहर गर्नु बेठीक थियो । र्‍याफ्टिङको भाषामा छाल उठेका ठाउँलाई र्‍यापीड भनिने रहेछ । यसका पनि स्तर छन् भन्ने हाम्रा गाइड सेतुले बताए । र्‍यापीड-४ सबैभन्दा बढि जोखिम र मज्जा आउने । तेस्रो र्‍यापीड भेट्दा सबै डर हराएर फेरि कतिखेर छालको सामना हुन्छ होला भन्दै पर्खने भइयो । त्यसपछि यात्राको मजा आयो । एउटा हिन्दी टीभीसीको संवाद सम्झना भयो - डर के आगे जीत है । तर, यात्रा केही जित्नका लागि थियो थिएन भन्ने आफैलाई हेक्का थिएन ।
पूर्वेली शहर धरानको एउटा लोभलाग्दो विशेषता के हो भने केही नयाँ गर्न चाहनेहरू छन् । फेसन, सिर्जना र मनोरञ्जनका नौलो हुनसक्ने बाटो पहिल्याउने फरक जमात भेटिन्छन् । 'एडभेञ्चर' मा यही फरक खोज्नेको एउटा जमातले र्‍याफ्टिङको यात्रा सम्भव गराएको थियो ।
धरान आएर तमोर जलयात्रामा जान चाहनेले मंसिरदेखि जेठसम्म २५ सयमै ६ घण्टाको साहसिक मनोरञ्जन पाउँछन् । 'धेरै घुमाउरो चेपचाप अनि र्‍यापीड धेरै भएकाले तमोर अलि अप्ठ्यारो नदि हो', तमोर रिभर र्‍याफ्टिङका सञ्चालक मदन ढकाल भन्छन् 'र्‍याफ्टिङमा जान दह्रो मुटु हुनुपर्छ । पहिले पहिले विदेशीले मात्रै यसको आनन्द लिन्थे । अब जानेहरू सबै नेपाली छन् ।'
हिमालय सम्बन्धी पुस्तकहरूमा उल्लेख भएअनुसार विहारको दुःख भनिने सप्तकोशी नदि अरूण, लिखु, दुधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी, तमोर र इन्द्रावतीको संगम हो । सबै पहाड भएर झरेका छन् । सप्तकोशीभित्र मिलेका छन् । फराकिलो आकार लिएपछि सप्तकोशी सुनसरी र सप्तरीको क्षेत्रबाट २ सय ६० किलोमिटरको यात्रा गर्दै भारतको कुर्सेला पुगेर गंगामा मिसिन्छ । पहाड चिरेर तराइ झर्ने नदिमध्ये तमोर कञ्चनजंघाबाट आउँछ । नेपाल र सिक्किमको सीमाना ८ हजार ५ सय ८६ मिटरको कञ्चनजंघा संसारकै तेस्रो अग्लो हिउँ टाकुरा हो । यहाँबाट पश्चिम नेपालतर्फ तमोर र पूर्व भारततर्फ टिस्टा नदि निस्केर मैदानको यात्रामा छन् । सप्तकोशीमा मिसिएर बग्नेमध्ये तमोरको पानी १९ प्रतिशत हुने यसको जानकारी पुस्तक-पत्रिकामा पाइन्छ । ३ हजार ८ सय ५३ मिटर उचाइको ताप्लेजुङको शिवाहुँदै तल झर्ने तमोर तीव्र बहाव भएको नदि हो । जलस्तरमा मौसमअनुसार घटबढ हुने भए पनि खहरे जसरी हिम नदि सुक्दैनन् । बाह्रैमास बग्छन् ।
कालीगण्डकी, कर्णाली, सुनकोशी, मर्स्याङदी, भोटेकोशी, सेती, दूधकोशी, त्रिशुली र तमोरलगायत यस्ता धेरै नदि छन् नेपालमा र्‍याफ्टिङको लामो-छोटो यात्राका लागि । तमोर तिनै नदिमध्ये अलि अप्ठेरो, बढि जोखिमपूर्ण र्‍यापीड भएको श्रेणीमा पर्छ ।
'धरानमा धेरै प्रकारको व्यवसाय गर्नेहरू छन् । मलाइ केही फरक, केही नौलो गर्ने सोच आयो । साथी भेटियो । अनि र्‍याफ्टिङमा लगानी गर्ने भइयो', ढकालले सुनाए, 'छान्न त छानियो । थाल्नुअघि पहिलो यात्रा हामी साथी मिलेर गर्‍यौं । त्यो दिन जिन्दगीमा कहिल्यै बिर्सन्न ।' मुलघाटबाट 'रबर बोट' मा निस्किएपछि आफूलाई यो यात्रा निकै जोखिमको लागेको उनले बताए । 'आखिर मान्छेले खोज्ने यस्तै अनौठो यात्रा पनि हो भन्ने सल्लाह मिल्यो । थाल्न त थालियो । अब आउ भनेर बोलाउनु कसलाई ?' उनले भने, 'हामीले २०६१ मा थाल्दा पहिलो वर्ष यहाँको वीपी प्रतिष्ठानमा डाक्टर पढ्न बाहिरबाट आएका विद्यार्थीले र्‍याफ्टिङ गरे ।' विस्तारै नेपाली विद्यार्थी पनि यो साहसिक मनोरञ्जन लिन अघि आउन थाले ।
उनका अनुसार तमोरमा यो पर्यटन गतिविधि ६ महिना चल्छ । 'पाँच महिना लगानी उठाउने, एक महिनाले नाफा गर्ने', उनले भने, 'बोट किन्ने, अफिस चलाउने, स्टाफ पाल्ने र आफ्नो खर्च निकाल्नेभन्दा बढि धेरै केही हुँदैन ।'
धेरै नेपालीलाई पौडन आउँदैन । पौडन नजान्नेहरू नदिमा रबरबोटमा बसेर गरिने यस्ता साहसिक यात्राका कुरा आए पछि सर्छन् । विस्तारै जानेहरूले बुझे, रबर बोटमा सवार हुनअघि सुरक्षित हुने 'टिप्स' दिइन्छ । बोटबाट खसिहाले नडुब्ने लाइफ ज्याकेट, हेलमेट र चिसो छल्ने लुगा लाउन पाइन्छ । जस-जसले यात्रा गरे, बुझे, उनीहरूबाटै सुनेकाहरू यात्राका लागि उत्साहित हुन थाले । त्रिशुली किनारको गाउँमा हुर्केका रिभर र्‍याफ्टर गाइड सेतु अर्थात् जीवन सिलवालको अनुभव हुन् यी ।
धादिङको बेनीघाट- ७ चरौंदीका यी युवाले तमोरका छालमा रमाउन चाहनेको अगुवाइ गर्न थालेको नौ वर्ष भएको छ । 'पौडी खेल्न आउँदैन भनेर डराउनु पर्दैन । हामी कसैलाई पनि डुब्न दिदैनौ', उनले भने, 'हामी कस्तो बेला जाँदा खतरा हुन्न भनेर सबथोक विचार र तयारी गरेपछि मात्रै खोलामा पस्छौं ।' उनको अनुभवमा पछिल्ला चार वर्षमा यो साहसिक पर्यटनमा नेपालीको सहभागिता दिनदिनै बढेको छ ।
राजधानीका र्‍याफ्टिङ सञ्चालक फर्महरूले विदेशी पर्यटकलाई प्याकेजमा घुमाउँछन् । त्यस्ता यात्रा हप्तौंको पनि हुन्छ । तर, ६ घण्टाको एडभेञ्चर तमोरमा सजिलै लिन सकिने उनले बताए । 'म पहिले यहाँको सिजन सकिएर इण्डियाको मनाली पनि पुग्थें । त्यहा पहिले इण्डियन गाइड थिएनन्', उनले भने, 'अब बग्रेल्ती भए । हाम्रो काम छैन । अब जहाँ हुन्छ नेपालभित्रै काम गरिन्छ ।'
३० वर्षीय सेतुले रबरबोटमा धेरै नदि छिचोलेका छन् । 'यो पेशामा धेरैजना छन् । संगठीत छैनन्', उनले भने 'सबैले जिन्दगीमा एकपल्ट यस्तो यात्राको मजा लिनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । हामीकहाँ विदेशी आएर मज्जा लिन्छन्, नेपाली किन पछि पर्ने ' र्‍याफ्टिङमा जानेका लागि अवधि, दूरि र र्‍यापीडका अवस्थाअनुसार फरक नदि, फरक शुल्क छन् । पायक पर्ने यात्रास्थल छान्नका लागि एकपल्ट अनुभव गरेका साथीका कुरा सुन्न उपयोगी हुने उनले बताए ।
मुलघाटबाट चतराघाटसम्म आइपुग्दा एकदेखि प्लस-चार भनिने र्‍यापीड दुइ दर्जन हाराहारी रहेछन् । प्लस अलि जोखिम र माइनसमा उद्धार अलि सजिलो हुने गाइडले सुनाए । धरानबाट मुलघाट जीपमा आइयो । किनारमा सामान उतारेर हावा भर्ने काम भयो । सेतुले 'सेफ्टी टिप्स' दिएपछि दुइवटा बोटको अघिअघि कायाकिङ निस्कियो ।
रबरबोटमा खानेकुरालगायत अत्यावश्यक सामान पनि थिए । सहभागीका एक-एकजोर लुगा, क्यामेरा पनि नभिज्ने गरि ब्यागमा बाँधिएका थिए । धरानका प्रियश गुरागाइँले छालसँगको पौंठेजोरीलाई भिडियोमा उतार्न ल्याएको 'गो-प्रो' क्यामेराको टेष्ट पनि यही यात्रालाई जुरेको थियो । कायिक सुनुवारको हेलमेटमा बाँधिएको गो-प्रो यात्रा सकिएपछि मात्रै हेर्ने शर्त थियो ।
विहानै धराने टोलीमा सामेल भएर जानुपर्ने भएकाले म अघिल्लै साँझ घरबाट हिडेका थिए । विराटनगरको स्नातकोत्तर क्याम्पसका इकोलोजी प्राध्यापक मित्र कुलप्रसाद लिम्बुको घरमा वास बसियो । यात्राको तारतम्य उनले नै मिलाएका थिए । त्यसैले टोलीमा अलि बढि प्राध्यापक थिए ।
अघिल्लो रात वर्षा भएको थियो । त्यसैले हाम्रो यात्राका दिन तमोरको जलस्तर केही बढेको थियो । 'पानी यतिसम्म बढदा ठीकै हो । र्‍यापीड अलि धेरै छ', सुनुवारले भने, 'लगातार पानी परिरहयो र धेरै भेल आएका बेला गाह्रै हुन्छ ।'
हामीलाई सेतुले साथ दिएका थिए । अर्को रबरबोटमा साइँला भनिने हीरा परियार गाइड थिए । उनले बेला बेला छिटो चप्पु चलाउन दिएको निर्देशन प्रष्ट सुनिन्थ्यो । 'अरू ठाउँ नदिका आसपास बाटो हुन्छन् । कसैलाई डर लागेर उत्रनु पर्‍यो भने बीचैमा किनारा आएर जाउ भन्न सकिन्छ', सेतुले भने, 'तमोरमा त्यो सम्भव छैन । बोटमा चढेदेखि उत्रने ठाउँ दोभान मात्रै हो । त्यो पनि चार घण्टाभन्दा छिटो पुगिँदैन ।' उनले ठीकै भनेका थिए । तमोरका छेउछाउ त्रिशुली जसरी सडकमार्ग रहेनछन् । अप्ठेरो भीर फोरेर तमोर हतारमा बगेको देखिन्थ्यो ।
एकाएक धड्कन बढ्यो । घुमाउरो पानी भएको 'हेलहोल' भनिने र्‍यापीडमा एकजना भाइ हाम्रो बोटबाट खसे । बोट रोक्न हुने ठाउँ थिएन । तर, काइक फर्किए । उनले विस्तारै ती डुबेकाको ज्याकेट समाते । बोट अलि मुन्तिर किनार लाग्यो । उनको तत्कालै उद्धार भयो ।
नदि जति बेगले मुन्तिर कुदेको हुन्छ, भेलसँगै रबरबोट सम्हालिन चूनौति हुने रहेछ । माथिबाट ठूला ढुंगा छल्दै घुमेका पानीमा बोट नियन्त्रण गर्न नभ्याए फनफनी घुम्ने । पल्टिने पनि रहेछ । रबरबोटमा लाइफलाइन भनिने बलियो डोरीको आड नछाडी गाइडको आदेशअनुसार चप्पु चलाए आउने मजाको वर्णन गर्न सकिदैन । 'म त पौडी खेल्नै नजान्ने मान्छे । तैपनि जिन्दगीमा यस्तो यात्राको मजा लिन पाइयो', विराटनगरका डा. शिवकुमार राइले भने, 'जे हुन्छ हुन्छ भनेर जाँदा र्‍याफ्टिङ फेरि फेरि फरक कोर्सका नदिमा जान मन लाग्ने ।'
एक दिनमा तमोरमा धरानबाट जाने टोलीमा २३ जनाले यात्रा गर्छन् । ३४ किलोमिटर छालसगको यात्रामा विहान खाजा, खानाको व्यवस्था हुन्छ । चतराघाट उत्रिएर रबरबोटका हावा खुस्काएपछि त्यसलाई गाडीमा लोड गरिन्छ । विहान मुलघाट लैजाने गाडीहरूले फेरि धरान ल्याएर छाड्छन् । कौतुहल मन लिएर उकालो चढेको मान्छे मुलघाटबाट बगेर चतरा आएपछि यो यात्राका मिठा अनुभव लिएर घर फर्कन्छ । हामीले पनि त्यसै गर्‍यौ । दोभानमा आएर खाना खाएपछि नदिले केही फराकिलो मैदान भेटेजस्तो भयो । समथर भुभागमा बग्दा नदिमा पहाडबाट खसजस्तो बहावको करेन्ट नहुने । हावाले पनि धेरै हान्ने ।
६ घण्टापछि हाम्रो टोलीको यात्रा सकियो । किनार आइयो । बोटका हावा खुस्काइयो । पट्याएर गाडीका छतमा राखियो । अनि चतराको सडकमार्ग धरान आइयो । हाम्रो यात्रा सकियो । सेतु, साइला र सुनुवारको यात्रा भने सिजन चलुञ्जेल नया यात्रीका साथ हरेक दिन हामी गए जसरी नै चलिरहन्छ ।
तस्बिर : यात्रा थुलुङ
(६ बैशाख २०७१ शनिवारको कान्तिपुर कोसेलीमा प्रकाशित सामाग्रीमा थोरै थपथापसहित)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 6:16 PM
प्राकृतिक स्रोतको डरलाग्दो दोहन